သာသနာ့တောင် ပါသမျှပြောင်မည် … | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » သာသနာ့တောင် ပါသမျှပြောင်မည် …
သာသနာ့တောင် ပါသမျှပြောင်မည် …
Posted by thihayarzar on Jan 20, 2011 in News | 18 comments
ပြောရရင်တော့ ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်လှန်ထောင်း သလိုဖြစ်နေတယ်ဗျ … မပြောလို့ကလည်းမဖြစ် ပြန်တော့ ပြောပြရသေးတယ် … ကျွန်တော်ကအားနေရင် ခရီးပဲထွက်ဖြစ်တယ် …. (၁၁)လပိုင်းကုန်ကာနီး ဆံတော်ရှင်ကျိုက်ထီးရိုးကို သွားဖြစ်တယ်ဗျ …… အဲဒီက အဖြစ်အပျက်ကလေးတွေပေါ့ဗျာ ….. အားလုံးလည်း ရောက်ရင် ကျွန်တော်လို မခံရအောင်လို့ပါ …. ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တန်ခိုးကြီး ဘုရားတစ်ဆူပါပဲ … အံသြဖွယ် ကြည်ညိုဖွယ် ရင်သပ်ဖွယ် လေးစားဖွယ် ကောင်းတဲ့ ဆံတော်ရှင်ကျိုက်ထီးရိုး ကို အနယ်နယ်အရပ်ရပ်က လာရောက်ဖူးမြော်ကြတဲ့ ဘုရားဖူးဧည့်သည်တွေကလည်း အများကြီးပဲ ကျိတ်ကျိတ်တိုးကို စည်ကားတာ …. လူတွေဆို တည်းခိုစရာနေရာမရှိလို ဆောင်းတွင်းကြီးချမ်းတုန်နေတာကို ဘုရားရင်ပြင်တော် ပေါ်မှာ ဖျာလေးတွေဌားရမ်းပြီးဖြစ်သလို အိပ်ကြရတယ် …. တည်ခိုခန်းတွေကလည်း ဈေးကြီးတယ် … အခန်းလေးတင်ဌားတာ .. စောင်နဲ့ခေါင်းအုံးနဲ့ကဌားရတာ … ရေဆိုလျှင် ၀ယ်ချိုးရတယ် .. မျက်နှာသစ်ဖို့လည်း ၀ယ်ရပြန်တယ် ..ပြောချင်တာက ဆံတော်ရှင်ကျိုက်ထီးရိုးသွားရာလမ်းတစ်လျှောက်မှာ အလှူခံတွေကလည်း ပေါလိုက်တာ … အစကတော့ ကုသိုလ်လိုချင်လို့ လှူတယ် ..နောက်တော့လှူကိုမလှူချင်တော့တာ .. အလှူခံတွေက အစစ်တွေမှမဟုတ်တာ နေ့စားလား လစားလားတော့ မသိဘူး .. လှူချင်လှူပါ မလှူချင်လည်း ရပါတယ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့က တာဝန်အရပြောရတာပါတဲ့ … ဒီလိုပြောတဲ့သူလည်းရှိတယ် … ကျိုက်ထီးရိုးရောက်ပြီးနောက်တစ်ရက် မုဆိုးတောင်သွားတယ် လှူခဲ့ပါတယ် အလှူခံတိုင်းကို လှူခဲ့တာ .. ကြွေပြားလှူတယ် ခေါင်းလောင်းလှူတယ် … နောက်ထပ် ကျောက်ထပ်ကြီးဘုရားကိုသွားတယ် …
ကျောက်ထပ်ကြီးဘုရားကိုသွားရာလမ်းတစ်လျှောက်မှာလည်း ဘုရားတွေအများကြီးရှိတယ် …. အလှူခံတွေလည်းရှိတယ် … ကျွန်တော်ကတော့ ရောက်တုန်းရောက်ခိုက်ဆိုပြီးတော့ ဘုရားတွေကို အကုန်ဝင်ဖူးတယ် … ဘုရားတစ်ဆူဝင်ဖူးတယ် ညီလေးရွှေသင်္ကန်းလေးကပ်လိုက်ပါဆိုပြီးလာပေးတယ် အဲဒါနဲ့ကပ်လိုက်တယ် တစ်ခုပဲလာပေးလို့တစ်ခုပဲကပ်လိုက်တယ် ကပ်ပြီးဘုရားကန်တော့ပြီးပြန်မယ်လုပ်တော့ ရွှေသင်္ကန်းဖိုးလေးပေးခဲ့ပါဦးတဲ့ ခံရပြီဆိုတာကိုတော့ သိလိုက်ပြီ ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ ၁၅၀၀ တဲ့ ရင်ပြင်တော်ပေါ်မှာ လေးဆိုင်းပါတဲ့ ရွှေသင်္ကန်းကို ၁၄၀၀ ပဲပေးရတယ် … မပြောတော့ပါဘူးဆိုဘူး ပေးလိုက်ပါတယ် … ကျောက်စီယိုဘုရားတဲ့ ၀င်ဖူးတယ် ဘုရားကိုရွှေသင်္ကန်းလေးတွေကပ်လို့ရပါတယ်တဲ့ မကပ်ချင်တော့ဘူး ရေပုံးလေးတွေလာပေးတယ် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျရေပူဇော်လိုက်ပါတဲ့ အန္တာရယ်တွေကင်းတယ်တဲ့ ရေပူဇော်ပြီးတော့ လာပြောပြန်တယ် ရေတစ်ပုံကို ငါးရာပါတဲ့ …ခံရပြန်ပြီ ….ကျောက်လှုပ်စေတီတဲ့ ၀င်ဖူးတယ် တစ်ယောက်ကဘုရားပေါ်ကနေတက်ပြီး ဘုရားကြီးကိုလှုပ်ပြနေတယ် … အဲဒီမှာတစ်ထောင်လှူလိုက်တယ် .. တစ်ထောင်လှူတော့ ခေါင်းလောင်းတစ်လုံး ပေးတယ် ကိုယ်တိုင်တက်ပြီးကပ်လို့ရတယ်လို့ပြောပြီး ဘုရားပေါ်ခေါ်သွားတယ် ..ဘာနေ့သားလဲတဲ့ နေ့နံကိုပြောလိုက်တော့ နေ့နံတွေဘာတွေရွက်ဖတ်ပြီးတော့ အဓိဌာန်နဲ့ဘုရားကိုလှုပ်ပြတယ် … ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလည်းလျှာတယ်တယ် … သူပြန်ဆင်ပြီး ကျွန်တော်ကမဆင်းသေးဘူးခေါင်းလောင်းကိုချိတ်နေတာ ပြီးတော့ ဘာမှမပြောပဲနဲ့ လှုပ်ကြည့်တာလည်း လှုပ်တာပဲ … အောက်ပြန်ရောက်တော့ နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်ပြီးတော့ကန်တော့တယ် စာရွက်လေးလာပေးတယ် ခေါင်းလောင်းအလှူငွေ ၃၀၀၀ တဲ့ … စိတ်ကဆိုးလာပြီ ကိုယ်ကလည်း ငရဲကြီးမှာဆိုးလို့ ဘာမှမပြောပဲနဲ့ပေးခဲ့တယ် … တောင်ပိုင်ဘိုးဘိုးကြီးတဲ့ ၀င်ပြီးတော့ကန်တော့ခိုင်းတယ် မကန်တော့လို့လည်းမဖြစ်ဘူး ကိုယ်သွားချင်တဲ့ဘုရားကလမ်းတစ်လမ်းထဲရှိတာ အလှူခံတွေကလည်း အားလုံးကလမ်းပေါ်မှာ အလှူခံတွေထဲကဖြတ်သွားရတာ …
ဘိုးဘိုးကြီးကို နေ့နံလေးတွေပြောပြီး ဘောင်းတော်လေးတွေ ဆက်လိုက်တဲ့ လာပေးပြန်ရော ( မှတ်ချက်။ ။ ကျွန်တော်ကအရမ်းလည်းအားနာတက်တယ်) ခံရပေါင်းများတော့မယူချင်ဘူး အတင်းပေးတော့ဆက်လိုက်တယ် ပြီးတော့ ၅၀၀ တဲ့…. နောက်ထပ်ဘုရားတွေအများကြီးမှာလည်း အဲဒီလိုတွေပဲ အကြိမ်ကြိမ်ခံရပါတယ် … ကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်တော်လှူလိုက်တာ ကျွန်တော်ကုသိုလ်ပဲလို့ပဲ ပြန်မှတ်ယူလိုက်ပါတယ် …. အလှူခံတစ်ခုနှစ်ခုမှာတော့ စာရေးထားတယ် လှူချင်မှလှူပါတဲ့ အတင်းအကျပ် လှူခိုင်းရင် ဘုရားဂေါပကကို လာတိုင်ပါတဲ့ .. တစ်ခုနှစ်ခုဆိုလို့ နှစ်ခုပဲရှိတယ် လမ်းတစ်လျှောက်မှာ ဘုရားတွေကအများကြီးပဲ လမ်းမှာလည်း ကလေးတွေလူကြီးတွေက ပေါက်ပြားလေးတွေကိုင် တံမြတ်စည်းလေးတွေကိုင်ပြီးတော့ လမ်းသန့်ရှင်းရေးတဲ့ ဆိုပြီး အလှူခံတာ တစ်လမ်းလုံးလူ ၂၀ လောက်တော့ရှိမယ် …..ပြန်ရင်လည်းအလှူခံတွေရှိသေးတယ် ….ဓမ္မ မိတ်ဆွေသူတော်စင်အပေါင်းလည်း ဆံတော်ရှင်ကျိုတ်ထီးရိုးကိုသွားမယ်ဆိုရင် ဖြင့်ကျွန်တော်လို့မခံရအောင်လို့ ဂရုစိုက်ကြပါလို့ …. ကျွန်တော်တင်မဟုတ်ဘူး လမ်းမှာဘုရားဖူးသွားတဲ့သူတွေကလည်း ပြောတယ် … သူတို့ဆီကဈေးသည်တွေကတောင် ပြောတယ်ဗျာ …. ဆံတော်ရှင်ကျိုတ်ထီးရိုးဂေါပကလူကြီးများကလည်း အရေးယူသင့်ပါတယ် ….. ဘုရားရင်ပြင်တော်ပေါ်မှာဆိုရင်လည်း အလှူခံပုံးတွေ ဆယ်ပုံးလောက်မကဘူးရှိတယ် .. မနက်ကတော့ ဘာမှမရှိဘူး ညလည်းရောက်ရော အားလုံးကပြည့်နေပြီ … ဒီပိုက်ဆံတွေကို ဘယ်နားမှာများ သွားသုံးနေကြလည်းမသိဘူး … အိမ်သာသွားရင် တစ်ရာ အပေါ့သွားရင် တစ်ရာ ရေပုံးသေးသေးလေးနဲ့တစ်ပုံးပဲရတယ် .. ညစ်ပက်ပြီးတော့ နံစော်နေတာပဲ … အိမ်သာကလည်း အများကြီးမရှိဘူးနော် ….. လူဒီလောက်လူတွေများပြီး ပိုက်ဆံတွေအရမ်းရတာ သန့်သန့်ရှင်းရှင်းလေးတော့ ထားသင့်တာပေါ့ …. မြန်မာပြည်ကြီးတိုးတက်ပါစေ ….
ဟူး … ဖတ်ပြီး သက်ပြင်းကြီးသာ ချသွားပါတော့တယ်
၁၅၀၀ကျပ်-ရွှေဆိုင်း။ ၅၀၀ကျပ်-ရေတပုံးဖိုး၊ ၁၀၀၀ကျပ်-လှူ။ ၃၀၀၀ကျပ်-ခေါင်းလောင်းအလှူ။ ၅၀၀ကျပ်-ဘောင်းတော်။
စာထဲက ကျပ်တွေအပင်ပန်းခံပေါင်းကြည့်နေတာ.. ၆၅၀၀ ကျပ်ဖြစ်နေတယ်..။
အဲဒီငွေတွေ အလဟဿဖြစ်သွားတယ်လို့ ..သေချာပေါက်ပြောရပါလိမ့်မယ်..။
လုပ်အားတွေနဲ့ .. မြေကြီးထဲက ပင်ပန်းကြီးစွာထုတ်ယူထားတဲ့..ရွှေ..ရွှေဆိုင်းဟာ တနှစ်ကြာတဲ့အခါမှာ မိုးလေနဲ့…မြေကြီးထဲပြန်ရောက်သွားမယ်..။
လုပ်အားအရင်းအနှီးနဲ့.. တောင်ပေါ်ရောက်နေတဲ့ရေဟာ.. မြေကြီးထဲပြန်သွားခဲ့လိမ့်မယ်..။
ခေါင်းလောင်းဟာ.. အချိန်တန်.. အဲဒီဂေါပကအဖွဲ့ကပြန်ဖြုတ်ချပြီး ..ဈေးရောင်းသူကို ပြန်သွင်းလိုက်လိမ့်မယ်..။
ဘောင်းတော်အလှူကတော့ .. သာသနာဖျက်စီးတဲ့သူတယောက်ကို ..အားပေးထောက်ပံ့ငွေဖြစ်ခဲ့လိမ့်မယ်..။
အဲဒီငွေကို … ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာ .. ဆေးဖိုးမရှိလို့ .. သေမလိုဖြစ်နေတဲ့လူနာရှင်တဦးဦးပေးလိုက်ရင်.. နတ်လူသာဓုခေါ်မယ်လို့.. ကျုပ်သေချာပေါက်ပြောရဲတယ်..။
အနည်းဆုံးတော့ .. နာရေးကူညီမှုအသင်းးကို လှူလိုက်ရင်..အင်မတန်မွန်မြတ်မယ် ..ကုသိုလ်အစစ်တကယ်ရမယ်… ထင်မိပါတယ်.။
ဂေါတမဗုဒ္ဓကတော့ .. သူ့ကိုယ်ပွားဆိုထုဆစ်ထားတဲ့..ဆင်းတုမပြောနဲ့.. သက်ရှိထင်ရှားကိုယ်တော်တိုင်ကို ထိုင်ကြည်ညိုနေတဲ့သူကိုတောင်.. အချည်းနှီးရဟန်းဆိုပြီး ..ငေါက်လွတ်ခဲ့သတဲ့..။
မြန်မာပြည် တိုးတက်ချင်ရင်.. ဘယ်သူကပြောခဲ့မှန်းမသိလို့.. ဘာမှန်းမသိတာတွေလုပ်နေတာတွေ ..အရင်ပြင်ရမယ်ထင်မိတာပါပဲ..။
(စိတ်မရှိနဲ့နော… ပို့စ်တင်ပေးပြီး ..အတွေ့အကြုံရေးပြတာ .. ကျေးဇူးကမ္ဘာပါ..။ အခုက .. ဒါမျိုးတွေနဲ့ပါတ်သက်ပြီး .. ဒီမှာဆွေးနွေးလို့ရအောင် .. စာထဲကအချက်အလက်ယူပြီး… အစဖေါ်ပေးလိုက်တာ..။ စာရေးသူကို တိုက်ရိုက်ဝေဖန်တာမဟုတ်ရပါဘူး..)
မြန်မာတွေအတွက် ဘုရားဖူး ခရီးစဉ် ဆိုတာမျိုးက အပန်းဖြေလိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်လည်း ပါမယ်ထင်ပါတယ်….
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဘုရာဖူးသွားတာ စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်ရတယ်ဆိုကတည်းက မကောင်းတော့ပါဘူး ….
အဲလိုခရီးစဉ်မျိုး ဆိုရင်တော့ ခရီးသွားလို့ ကုန်မယ့် ငွေကို လူမှုရေးအရ အကျိုးရှိမယ် ထင်တဲ့ နေရာမှာ လှူလိုက်တာပဲ ကောင်းမယ် ထင်ပါတယ် …… စေတနာ သုံးတန် မပြတ်သားပဲ အားနာလို့ လှူရတာမျိုးဆို လုံးဝ ပြတ်ပြတ်သားသား ငြင်းဆန်သင့်ပါတယ် …. ဒါ ကျနော့် အမြင်ပါ …..
အရှင်အိန္ဒက ကိုယ်တိုင်လည်း နည်းနည်းပြောပါဦး။
ဘုရား၊တရား၊သံဃာ နဲ့ ဒကာခိုင်ပြောတဲ့ ဆင်းတုတော်ကိစ္စ လည်းရှင်းပြပါ။
ကျွန်တော်ကတော့ အများအားဖြင့် အဲသလိုနေရာတွေသွားရင် မလှုပါ။ တမင်ကို သိနေလို့ မလှုတာပါ။ လှုလေ ဆိုးလေဖြစ်နေကြတာကိုး။
ကျိုက်ထီးရိုး နာမည် ကြီးတာ ကြာပေါ့။
၂၀၀၀ လောက်က ထင်တာဘဲ ကျိုက်ထီးရိုးသွားတာ ကျောက်ဆီယို ဘုရားမှာ မိုးလေမိလို့ ဘုရားဆင်းတု ပြုတ်ကျပြီး ကျိုးပဲ့သွားတယ်တဲ့ လှူနိုင်ရင် လှူပါတဲ့ လှူလိုက်ပါတယ် ဘုရားလှူပြီးတော့ အနေကဇာတင်ဖို့ နဲ့ ရဟန်းတွေ ပင့်ပြီးရင် အလှူ ငွေပါ တခါတည်း လှူစေချင်တယ်တဲ့ လှူခဲပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဘုရားအလှူရှင်အဖြစ် ပီတိ ဖြစ်ပြီး အိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်။ နောက်တလ နေတော့ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်စွာ ထပ်ရောက်သွားတယ်။ ဂေါပကတွေက သိတယ်လေ.. တယောက်ကို တနှစ်တခေါက်ဘဲ ရောက်တာ အဲလောက် ၁လ ဘဲခြားပြီး ပြန်မလာဘူး နောက်ပြီး လှူသွားလဲ ၂ရက်ထက် ဒီမှာ ပိုနေမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိတော့ အလှူငွေကို သိမ်း နောက်လူကို အလှူခံတာပေါ့။ နောက် ၁လ နေလို ပြန်သွားတော့ အလှူခံတွေ များတော့ မမှတ်မိဘူး ထင်ပါရဲ့ ထပ်ပြီး အလှူခံတယ်။ ဒေါသလည်း ထွက်မိတယ်.. လှူပြီးတာလည်း ဘာမှ မလုပ်ထားဘဲ ဘုရားပဲ့လေးနဲ့ အလှူဆက်ခံနေတယ်။ ပြောတော့ အကြောင်းပြချက် မျိုးစုံပါဘဲ။ မေ့တောင် မေ့သွားပြီ။ အလှူပိတ်တာ မျိုးတော့ မလုပ်ကောင်းပေမဲ့ အလှရှင်တွေ ဆန္ဒနဲ့ လှူသင့် မလှူသင့် အကျိုးရှိမဲ့ အလှူမျိုးတော့ လုပ်သင့်ပါတယ်။
ဒါနဲ့ တွေးမိတာတော့ ဒီအလှူငွေတွေ ပေါပေါရ ပေါပေါသုံးပြီး ဖြုန်းသုံးပစ်လေမလားတောင် မသိဘူး။ ကိုယ်တိုင် ပင်ပန်းခံပြီး ရှာတာ မဟုတ်တဲ့ ပိုက်ဆံ ဆို ဘယ်သူမှ တန်ဖိုးမထားတတ်ဘူး။ ကုန်လည်း အေးတာဘဲ နောက်တခါ ထပ်ရှာယုံပေါ့ ဆိုတဲ့ လူမျိုးတွေဘဲ မြင်ဘူးတယ်။
ဆူးပြောသလိုဆိုရင် …နောက်တစ်ခါသွားပြီး ကိုယ်လှူဒါန်းထားတာတွေ တစ်ကယ်ရှိရဲ့လား သွားပြန်ကြည့်ရဦးမယ်…။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ ၊ ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းက ကျိုက်ထီးရိုးရောက်တယ်… မုဆိုးတောင်ပေါ်မှာ ဘုရားတည်နေလို့ ဆင်းတုတစ်ဆူ တနင်္ဂနွေဒေါင့်မှာထားဖို့ လှူခဲ့တယ်… ။ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းဖို့လည်း တစ်ဆင့် ဖိုးလှူခဲ့တယ်… မှတ်မှတ်ရရ … နတ်ရေကန်မှာ ရေအိုးလေးနှစ်လုံးပဲရှိပါတယ်ဆိုလို့ နောက် ထပ်လှူခဲ့တယ်… မြသပိတ်လှူတယ်… ခေါင်းလောင်းနဲ့ ရေအိုးဆိုရင် ဘယ်နှစ်လုံးမှန်းတောင်မမှတ်မိတော့ပါဘူး …။ ရောက်တုန်းရောက်ခိုက် လိုအပ်နေတာနဲ့ကြုံတော့ လှူခဲ့မိတာပေါ့… ။ စပ်စုချင်တော့… မြသပိတ်လှူထားတာ တစ်ကယ်အဲ့ဒီနေရာမှာ ထားပေးမပေးသွားပြန်ကြည့်တော့ တွေ့ခဲ့ပါတယ်… နေရာတကာ မယုံမကြည် သံသယများတဲ့ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်တောင် အပြစ်တင်မိသေးတယ်… ။ တခြား လှူခဲ့တာတွေကတော့ ပြန်သွားကြည့်လို့မရသေးတော့ ဒီတိုင်းပဲ ထားခဲ့ပါတယ်…။လှူတဲ့လူက လှူလိုက်တာပေါ့ .. ဒါပေမဲ့ လိမ်တဲ့လူတွေ ၊ ကန်ထရိုက်တွေက လုပ်ရဲ ၊စားရဲရင်လည်း လုပ်ကြပါစေ …။ ကံကျွေးလိုက်ပါလိမ့်မယ် ။
အင်း အဲဒါတော့ နည်းနည်းခက်တယ်
အဆောက်အဦး တစ်ခုလုံးဖျက်ပြီးမှ အသစ် ပြန်ဆောက်ရမလို ဖစ်နေပြီ ဟိုနေရကလို ဒီနေရာကပဲ့ အမိုးကယို ဒိုင်းမျှားကအက် နဲ့
သိရသလောက်တော့ ကျိုက်ထီးရိုး က အလူခံ ၉၅% လောက်က ကန်ထရိုက်စံနစ်နဲ့ပေးထားတာပါ။
ဥပမာ…ကျောက်ထပ်ကြီးဘုရား အတွက် တစ်နှစ်ကိုအလူခံခွင့် —-သိန်း နဲ့ ဂေါပက ကိုအပြတ်ပေးရပါတယ်။
အလူခံလို့ရသမျှကတော့ ကန်ထရိုက်လုပ်သူက ရပါတယ်..
ဒါကြောင့် တချို့ နေရာတွေမှာ အတင်းအကြပ်ကို အလူခံတာတွေ့ရမှာပါ။
ဒါကလဲအခုမှ မဟုတ်ပါဘူး..ဒီလို စံနစ် နဲ့လုပ်လာတာ နှစ်တော်တော်ကြာပါပြီ..
ကျွန်တော် ဆိုရင် သိလိုက်တဲ့ နှစ်ကစပြီး အလူငွေလုံးဝ မထည့်တော့ပါဘူး…
ကန်ထရိုက်ပေးထားမှတော့ ဘယ်တိုင်လို့ ရမလဲ။
ကန်ထရိုက်ကလည်း အမြတ်ရအောင် ရှာရမှ ဖြစ်မှာ ဆိုတော့.. ဘုရားဖူးတွေတော့ ဓါးမြ တိုက်ခံရတော့တာပေါ့။ ဘိုးဘိုးကြီး နတ်နန်းတွေဆိုလည်း အတင်းကာရောဘဲ.. ၀င် မကန်တော့ရင် လမ်းမှာ ချက်ချင်းဘဲ အမောဆို့သေမလို လမ်းကြို လမ်းကြားကဘဲ ကျားက ချက်ချင်း ထွက်ပြီး ကိုက်တော့ မလိုလို.. လျောက်ပြောပြီး ဆဲဆိုကျိမ်းမောင်းနေတတ်သေးတယ်။
နောက်တခါသွားမှ အသံပါသွင်းလာပြီး တင်ပေးမယ်။ အခုတော့ မရောက်တာ ကြာပြီ။ နီးလို့ မရောက်ဖြစ်ဘဲ ဖြစ်နေတာ။
khaing lin says:
ကျွန်တော့တုန်းကတော့ဘာသာ ခြား လို့ပြောပြီး ငြင်း လိုက် တယ်.အ ကုန် သာ လှူ ရ ရင် မွဲ ရ ချေ ရဲ.။
ကန်ထရိုက်စနစ်ကြောင့်ဖြစ်တာမို့ သာသနာကို လူလိုခေတ်မှီရမယ် ဘာညာဆိုတဲ့ သဂျီးမင်းလို လူမျိုးတွေကိုပြောဗျို့။
ကျိုက်ထီးရိုးတောင်က ရှိရှိသမျှဘုရားစေတများကို ၀င်ဦးချကန်တော့ချင်ပါသော်လည်း ထိုစေတီများရှိ အတင်းခေါ်နေသော နိဗာန်ဆော်ခေါ်မလားဘာခေါ်မလား မသိသော ပုဂိုလ်များကို အာရုံနောက်သောကြောင့် အဝေးကသာ လက်အုပ်ချီကန်တော့ခဲ့ရပါကြောင်း….. ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားဖူးသွားတာ ငါတို့ကို အားလုံးက အချဉ်ဖမ်းနေကြတာပါလားလို့ ခံစားခဲ့ရပါကြောင်း…………
ကန်ထရိုက်သာဆွဲပါတယ် … အဲဒီပိုက်ဆံများကို ဘယ်နေမှာများသွားသုံးလည်းမသိဘူးနော် …. ဘုရားကို အကြောင်းပြုပြီးတော့ မလုပ်သင့်ပါဘူး … ဘုရားပေးတဲ့ထမင်းလေးပဲစားရရင်တော်ပါတော့ဗျာ …
ဟုတ်တယ်နော်… သူတို့ပြောပုံလေးကများ… ကျောက်ပြားလေးက ဆယ်ချပ်ပဲလိုတော့သလိုလို… လမ်းလေးက ဘယ်နှစ်ပေပဲ ကျန်တော့သလိုလိုနဲ့… ခေါင်းလောင်းလှူတော့လည်း ချိတ်ထားတာက စေတီပတ်ပတ်လည် အလုံး ၂၀ တောင်ပြည့်ရဲ့လားမသိဘူး… ပြီးရင် ပြန်ဖြုတ်ပြီး ပြန်လှူခိုင်းတာ…
တစ်ခုလှူရင်လည်း မပြီးဘူး… နောက်တစ်ခုကို အတင်းကာရော အလှူခံတယ်… သူတို့မို့လို့ မကြောက်မရွံ့လုပ်စားရဲတယ်… မလှူရင်ဘဲ ကျားကိုက်ခံရပြီး သေမယ့် ဒီဇိုင်းနဲ့
ဒီလို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ တန်ဖိုးထားကိုးကွယ်ပြီး… tourist site ဖြစ်နေတဲ့နေရာတစ်ခုမှာ ဒါမျိုးတွေရှိတာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကို အထင်သေးစေတဲ့ကိစ္စတွေပါပဲ…